Kwakatangira tutu ballet - Nhau - Fitdance ballet tutu fekitori.
Imba > Nhau > Indasitiri nhau > Kwakatangira tutu ballet
Yekutanga TUTU madhirezi
Muna 1713, French Royal Academy yeDanced yakavandudzwa muTheatre yeParis, uye ballet yakatanga kutora guta. Vakuru veFrance vaiwanzosangana nekukurukura pamabalkoni akapamhama vachiona vatambi ve ballet vari kure.Kuti uite kuti vatambi vanyatsooneka kune vateereri vari kure, zvipfeko zvevatambi zvakanaka uye zvakashongedzwa zvine mutsindo. Vasikana vanopfeka madhirezi-ekureba-kureba, ayo akanaka asi achirema, zvichiita kuti zvive zvakaoma kufamba uye kukanganisa zvakanyanya kuita.
Marie Camargo ndiye akavandudza mututu. Paakaziva kuti siketi inorema yaiita kuti kutamba kusachinje, akatanga kusimudza mupendero wenguvo pamusoro pegumbo chete, kuitira kuti vateereri vaone mafambiro etsoka dzevatambi zvakajeka.
Marie Taglioni akatora chitarisiko chemberi: zvichibva pana Marie Camargo, akagadzirisa chipfeko ichiita bhero TUTU ratinoziva nhasi. Kureba kwacho kwakawedzeredzwa zvakare kusvika zvishoma pasi pemhuru, zvichibvumira nhanho dzemutambi kuti dzive dzakanyatso kukosheswa nevateereri.
Kuberekwa kweiyo TUTU kupfeka
Muna 1832, M. Taroni akatanga kushandisa anoff-the-bendekete rakamugadzirirwa naE E. Lamy, achiidaidza kuti Romantictutu. Iyo siketi ine yakasimba bodice uye bhero-rakaumbwa rakapetwa siketi ine theknee pasi payo. Iyo siketi yakatemwa nematanho akati wandei egehena chena uye inowirirana neyakajeka tsvuku pantyhose, iri nyore kuti vatambi varatidze mafambiro avo ekutamba sekutamba nekurova tsoka. Muna 1880 tutu akapfupikiswa, asina-makumbo tutu, anozivikanwa sekuti tutu, akave akajairwa chipfeko che ballet. Theskirt ine 4 kusvika ku5 matete esiriki crepe, iyo inosungirirwa kune waistcoat yeiyo inoenderana saizi.
Yapfuura:Tutu ballet siketi, yakave yakanaka kwemazana emakore
Tevere:Ndeapi mana akakosha maitiro e ballet?